Akụkọ - Ọrụ inoculation Microbial
1. Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa (ya na Staphylococcus aureus)
(1) Tupu ịwa ahụ, jiri mmanya 75% hichaa aka gị, ma mee ka oriọna mmanya na-aba n'anya gbanye mgbe mmanya ahụ kwụsịrị.
(2) Jide eriri eriri na ụgbọ elu na-atụgharị n'etiti mkpịsị aka nke aka ekpe na mkpịsị aka anọ ndị ọzọ, nke mere na ụgbọ elu ahụ na-atụgharị na akụkụ nwere nsogbu dị elu na n'ọnọdụ kwụ ọtọ.
(3) Buru ụzọ tụgharịa eriri na tampon n'ụgbọ elu chọrọ ka ọ dị mfe ịdọrọ ya n'oge inoculation.
(4) Jide mgbanaka inoculation n'aka ekpe (dị ka ijide mkpịsị ugodi), wee were ire ọkụ mee ka njedebe mgbanaka ahụ kwụsị, wee kpochaa tube ule ndị ọzọ nwere ike ịgbatị n'ime tube ule.
(5) Jiri mkpịsị aka mgbanaka, obere mkpịsị aka na ọbụ aka nri wepụ eriri eriri na eriri owu ma ọ bụ okpu okpu nke tube ule chọrọ ka ejikọta ya n'otu oge, wee hapụ ọnụ tube ule. jiri nwayọọ nwayọọ na-ekpo ọkụ ka ọ bụrụ sterilize (anaghị ere ya ọkụ).
(6) Gbatịa loop inoculation na-ere ọkụ n'ime tube omenala nje bacteria, metụ aka mgbochi inoculation na mgbidi dị n'ime nke tube ule ma ọ bụ ọkara na-enweghị nje nje bacteria, hapụ ya ka ọ dị jụụ, wee jiri nwayọọ kpochapụ obere akpa nje bacteria, wee wepụ ya. nje bacteria sitere na nje bacteria.Wepụ loop inoculation site na tube mkpụrụ.
(7) Ngwa ngwa gbatịa loop inoculation nke nwere nsogbu ahụ n'ime tube ule ọzọ nwere mmasị iji jikọọ.Site na ala nke bevel ahụ gaa n'elu, mee ahịrị dị oke n'ụdị "Z" azụ na azụ.Mgbe ụfọdụ, a pụkwara iji agịga inoculation mee ka eriri dị n'etiti etiti ahụ maka ịgba ọgwụ mgbochi, iji hụ àgwà uto nke eriri ahụ..
(7) Ngwa ngwa gbatịa loop inoculation nke nwere nsogbu ahụ n'ime tube ule ọzọ nwere mmasị iji jikọọ.Site na ala nke bevel ahụ gaa n'elu, mee ahịrị dị oke n'ụdị "Z" azụ na azụ.Mgbe ụfọdụ, a pụkwara iji agịga inoculation mee ka eriri dị n'etiti etiti ahụ maka ịgba ọgwụ mgbochi, iji hụ àgwà uto nke eriri ahụ.
(8) Mgbe emechara ọgwụ ahụ, wepụta mgbanaka inoculation iji gbaa ọnụ tube ahụ ọkụ ma tinye ya na plọg owu.
(9) Gbanyụọ mgbanaka inoculating ahụ site n'ịkpọ ya na-acha uhie uhie.Wetuo akaghị inoculating ma mee ka plọg owu sie ike.
2. Mgbochi mmiri
(1) A na-ejikọta usoro nke slanted na mmiri mmiri.A na-eji usoro a lelee njirimara uto nke nje bacteria na mkpebi nke mmeghachi omume biochemical.Usoro a na-arụ ọrụ dị ka ọ dị na mbụ, mana ọnụ nke tube ule na-agbago elu iji gbochie mmiri mmiri omenala ịpụ mgbe etinyere nje bacteria., Ghichaa mgbanaka inoculation na mgbidi dị n'ime nke tube ahụ ugboro ole na ole iji sachaa nje bacteria na mgbanaka ala.Mgbe ịgba ọgwụ mgbochi ahụ gasịrị, gbanye plọg owu wee kpatụ tube ule ahụ nke ọma n'ọbụ aka ka ọ gbasaa nke ọma.
(2) Inoculate mmiri mmiri na-ajụ site na mmiri mmiri mmiri.Mgbe eriri ahụ bụ mmiri mmiri, jiri pipette ma ọ bụ dropper na-adịghị mma maka nkwonkwo na mgbakwunye na loop inoculation.Mgbe ị na-agba ọgwụ, naanị wepụ ihe nkwụnye owu dị n'akụkụ ọkụ ahụ, gafee oghere ahụ n'ọkụ ahụ, jiri pipette na-adịghị mma ṅụọ mmiri nje ahụ n'ime ngwọta omenala, ma maa jijiji nke ọma.
3. Mgbochi efere efere
A na-akpụ nje bacteria ma gbasaa na efere.
(1) Inoculation site streaking Hụ usoro ahịrị nkewa nkewa.
(2) mkpuchi na inoculation Mgbe aṅụ ihe ngwọta nje bacteria n'ime efere na pipette na-adịghị mma, gbasaa ya n'elu efere ahụ na mkpanaka iko.
4. Inoculation Puncture
A na-etinye ụdị ahụ n'ime oghere miri emi siri ike.A na-eji usoro a maka inoculation nke nje bacteria anaerobic ma ọ bụ maka ileba anya na njirimara physiological mgbe a na-achọpụta nje bacteria.
(1) Usoro ọrụ bụ otu ihe ahụ dị n'elu, mana agịga inoculation eji kwesịrị ịdị ogologo.
(2) Gbuo agịga inoculation site na etiti etiti omenala ahụ ruo mgbe ọ dị nso na ala nke tube ahụ, mana etinyela ya, wee jiri nwayọọ nwayọọ wepụ ya site na ụzọ mbụ ịkpọpu ya.